Fironana ankehitriny amin'ny famolavolana sary | Famoronana an-tserasera
Fironana ankehitriny amin'ny famolavolana sary
Jorge Neira | | sary Masina, sary, dia midika hoe
Voalaza fa famolavolana sary dia mifandray akaiky amin'ny teknolojia, izany no antony tsy maintsy ampifanarahan'ireo manampahaizana manokana amin'ity sehatra ity haingana ny filan'ny mpampiasa, ny fironana ary ny tsirony.
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny sasany amin'ireo fironana ankehitriny izay hita eo amin'ny famolavolana sary, koa mariho tsara.
1 Fironana enina ankehitriny amin'ny famolavolana sary
1.1 Sary manerana ny efijery iray manontolo
2 Ny karazana endritsoratra
2.1 Bokotra fiantsoana hetsika
2.2 Sarimiaina sy tetezamita
2.3 Volavola ampiasaina amin'ny fitaovana finday
2.4 Sary SVG
3 Ohatra, ho mahazatra be ny mandinika
3.1 Fampiharana amin'ny Internet mandroso
3.2 Volavola taolana
Fironana enina ankehitriny amin'ny famolavolana sary
Sary manerana ny efijery iray manontolo
Noho ny fiatraikany be dia be izy ireo mety tsara hahatratrarana ny sainaNa hamela hafatra, hanaparitaka marika, handray ny tranonkala iray, amin'ny alàlan'ny sary iray izay mety ho tena tsotra na feno feno antsipiriany; eny, ny maranitra na ny famaritana an'io dia tena zava-dehibe.
Ny karazana endritsoratra
Para offset ny fahatsorana izay manjaka amin'ny endrika sary ankehitriny amin'ny ankapobeny ary ny fampiasana typografia dia miorina eo afovoany, izany no antony ilana ny safidy marina iray mitovy amin'izany, izay tsy maintsy atao mahavariana mba hahatratrarana ny tanjona. Mety ny manome hafatra na ny fandehanan'ny mpampiasa mivantana amin'ireo bokotra fiantsoana, izay horesahintsika manaraka.
Bokotra fiantsoana hetsika
Tena mifanindran-dàlana ireo volavola vita amin'ny sary efijery feno, mety ho an'ny fironana minimalista, kanto izy ireo ary miaraka amin'izay koa mahavariana ary mahatratra ny tanjona, dia ny tsindry ny mpampiasa azy ireo ary miditra amin'ny fampahalalana bebe kokoa.
Sarimiaina sy tetezamita
Izy ireo dia a fomba nifaneraserana am-boalohany amin'ny mpampiasa tranonkalaZava-dehibe ny tsy hamenoana azy amin'ireny, ny mifanohitra amin'izay, ny ho stratejika rehefa mampiasa azy ireo ka ny vokatra dia araka ny antenaina, fiantraikany ary ankafizo ireo mijery azy ireo.
Volavola ampiasaina amin'ny fitaovana finday
Ny fitaovana finday marani-tsaina dia nivadika fitaovana miasa, fandaharam-potoana manokana, fifandraisana ary ilaina isan'andro amin'ireo manana; Vokatr'izany, ny fampifanarahana ireo fitaovana ireo hanohanana ny fitetezana tranonkala dia nanjary ny famolavolana sy fampifanarahana an'ireo tranonkala ireo mba hifanaraka ary azon'ny mpampiasa ampiasaina na aiza na aiza misy azy.
Misy orinasa sasany manana kinova amin'ny tranokalany natao manokana ho an'ny fitaovana finday.
Izy io dia manondro ny famokarana sary amin'ny endrika nomerika Manomboka amin'ny tarehimarika geometrika samihafa izay mahaleo tena, satria tsy mitovy amin'ireo sary misy pixel izy ireo, avelany hitombo ny sary nefa tsy ho very ny kalitaony na ny hamafiny, ka izany no ampiasana be azy ireo amin'izao fotoana izao ary indrindra amin'ny logo amin'ny tranonkala ary amin'ny sary tena tsotra hita ao amin'ny pejy fandraisana.
hafa fironana amin'ny 2017 Nambaran'izy ireo fa ny famolavolana sary dia azo ampiharina manokana hanatsarana sy hivezivezy amin'ny finday, satria ny isan'ny mpampiasa mijery tranonkala dia manao izany indrindra avy amin'ny findainy.
Ho hitantsika amin'izay, fampifanarahana amin'ireo tranonkala efa misy ary famolavolana vaovao mikendry ireo mpampiasa finday.
Ohatra, ho mahazatra be ny mandinika
Fampiharana amin'ny Internet mandroso
Izy ireo dia ny mifanohitra amin'izay fantatsika ankehitriny amin'ny fampiharana sy ireo miseho ao amin'ny App Store sy Play Store ary tsy maintsy mila misintona isika vao afaka mampiasa azy ireo amin'ny finday, ny fahasamihafana lehibe dia afaka mampiasa ireo PWAs ireo isika mivantana avy amin'ny navigateur nefa tsy mila misintona azy.
Azo idirana amin'ny efijery an-trano sy amin'ny birao.
Ny tranonkala dia mamolavola ary mandroso, dia hivoatra toy ny hoe fampiharana ary vokatr'izany dia hisy mpamorona maro kokoa hangataka ny hanao fangatahana zanatany avy amin'ireo magazay.
Tsy toy ny Spinner, ny fomba fampidinana ireo tranokala amin'ny taolam-paty ankehitriny, dia manondro ny famindrana amin'ny ampahany, mandeha amin'ny singa tsotra indrindra amin'ireo singa sarotra indrindra, nefa miaraka amin'ny afara na ny taolan'ilay efijery izay fitetezanao. Misaotra an'io, ny mpampiasa rehefa mijery ny placeholders afaka maminavina ireo ho avy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Fironana ankehitriny amin'ny famolavolana sary
Avereno sary taloha miaraka amin'ny Photoshop
Fandaharana sy fitaovana amin'ny famolavolana sary